Friday . 21 February . 2020
YBS ဘတ်စ်ကားများပေါ်တွင် စာရွက်များဝေကာ လိုက်လံတောင်းရမ်းစားသောက်နေသူများကို ရှင်းလင်းမည်
YBS ဘတ်စ်ကားများပေါ်တွင် စာရွက်များဝေကာ လိုက်လံတောင်းရမ်းစားသောက်နေသူများကို ရှင်းလင်းထိန်းသိမ်းရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီများကို အကြောင်းကြားထားကြောင်း လုံခြုံရေးနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာနမှ ဌာနမှူး ရဲမှူးကြီး သက်လွင်က ပြောကြားသည်။
ယခုလက်ရှိ လူစည်ကားရာနေရာများနှင့် YBS ဘတ်စ်ကားများပေါ်တွင် ကလေးသူငယ်များက မိတ္တူဆွဲထားသည့် အလှူခံစာရွက်များကို ကားပေါ်ရှိ ခရီးသည်များကို လိုက်လံဝေငှကာ တောင်းရမ်းစားသောက်သည့် ဖြစ်စဉ်များ များပြားလာကြောင်း ခရီးသွားက တိုင်ကြားသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်းရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“တောင်းရမ်းစားသောက်တဲ့ သူတွေကို လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ထိန်းသိမ်းပြီးတော့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာကို ပို့ဆောင်ပေးတယ်။ အခုလက်ရှိ တောင်းရမ်းစားသောက်သူတွေကို တွေ့ရှိရင် ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် စည်ပင်ရဲ့ လက်ရှိ လူအင်အားနဲ့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်”ဟု ရဲမှူးကြီးသက်လွင်က ဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ လုံခြုံရေးနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာနမှ ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်အထိ တောင်းရမ်း စားသောက်သူ ၁၂၅၀ ဦးနှင့် ငွေကျပ် ၁၇ သိန်းကို ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်း ယင်းဌာနထံမှ သိရသည်။
တောင်းရမ်း စားသောက်သဖြင့် လိုက်လံထိန်းသိမ်းခံရသည့်သူများကို လူအခွင့်အရေးနှင့် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာများနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာများဆီ ပို့ဆောင်ပေးရကြောင်းနှင့် ယင်းတောင်းရမ်းစားသောက်သူများမှာ တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်နေခြင်း မဟုတ်သည့်အတွက် ဖမ်းဆီး၍မရကြောင်း လုံခြုံရေးနှင့် စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးဌာနထံမှ သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း တောင်းရမ်းစားသောက်မှုမှာ လူစည်ကားရာ အရပ်များ၊ လမ်းဆုံ လမ်းခွများတွင် တစ်နေ့တခြား ပိုမိုများပြားလာပြီး စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာမှ ထွက်လာပြီး ငွေလွယ်လွယ်ရသည့် တောင်းရမ်းသည့် လုပ်ငန်းသာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အခြေအနေများကြောင့် သံသရာလည်နေကြောင်း ရဲမှူးကြီး သက်လွင်က ဆိုသည်။
လက်ရှိဘက်ဂျက်တွင် တောင်းရမ်းစားသောက်များကို လိုက်လံထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ကားအသစ်တစ်စီးကို ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ထံ တောင်းခံထားရှိပြီး လမ်းဆုံလမ်းခွများတွင် ဝန်ထမ်း ၅ ဦးချကာ နေ့စဉ် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း လုံခြုံရေးနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာနထံမှ သိရသည်။
ဆိုင်ကယ် နှင့် ဘင်္ဂါလီ/အစ္စလာမ် တစ်ဦးလျှင်(၅)သိန်းကျပ်ဖြင့် ပို့ဆောင်သူအား ဖမ်းဆီးရမိ
ဘူးလက်ဦးလှဆွေ တရားရုံးလာရောက်ဖို့ အမိန့်ထုတ်
ဗစ်တိုးရီးယားလေးကို သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းမစာ ဝေဖန်လိုက်ပြန်တဲ့ မကွေးက ဆရာဝန်…
ကေတုမတီမြို့သစ်သို့ သွားရန်ကယ်ရီငှါးသော အမျိုးသမီးအား အဆိုပါ ကယ်ရီသမားမှ အဓမ္မပြုကျင့်